जिम गएर मात्र केही हुँदैन, स्वस्थ तथा मजबुत शरीरका लागी अनिवार्य खानुहोस् यी पाँच खानेकुरा - ज्ञानविज्ञान
जिममा गएर तपाई घण्टौं पसिना बगाउनुहुन्छ । तर यदि तपाई यी ५ खानेकुरा खानुहुन्न भने त्यो सबै बेकार हुन जान्छ । यदि तपाई स्वस्थ्य रहन चाहनुहुन्छ भने जिम जानुका साथ साथै नियमित यी ५ खानेकुरा पनि खाने गर्नुहोस् ।
फिट र हेल्दी रहनु छ भने फाइबर आवश्यक पर्छ । यस्तोमा जिम जानुका साथै ब्रेकफास्टमा अन्य खानेकुराको ठाउँमा जौंबाट बनेका खानेकुरा खानुहोस् । जौंमा कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, खनिज तथा भिटामिन प्रचुर मात्रामा हुन्छन् । यसले शरीरलाई पर्याप्त मात्रामा फाइबर पनि पाइन्छ । जौंबाट अतिरिक्त फ्याट पनि मिल्दैन्, जो शरीरमा मोटोपन बढाउन मद्दत गर्छ ।
जिम जानेबेला धेरै इनार्जी आवश्यक पर्छ । यस्तोमा मात्र अन्न खानाले शरीरलाई आवश्यक पर्ने उर्जा प्राप्त हुन सक्दैन । तपाईले केरा खानु जरुरी छ । किनकी केरामा थाइमिन, नियासिन फोलिक एसिडको रुपमा भिटामिन ए र बी पर्याप्त मात्रामा हुन्छ । यसका अतिरिक्त केरा उर्जाको लागि राम्रो स्रोत पनि मानिन्छ । जसले तपाईको शरीरलाई उर्जावान बनाउन मद्दत गर्नेछ ।
माछा पनि खानुहोस्
जिममा वर्कआउट गर्दा मांसपेशीमा दबाव पर्छ । यस्तोमा यदि हामीले मांसपेशीलाई बलियो बनाउन कुनै विशेष खानेकुरा खाएनौं भने कमजोरी बढ्ने डर हुन्छ । यसकारण जिम जाने व्यक्तिले माछा खानु जरुरी हुन्छ । माछाले मांसपेशी निर्माण गर्न तथा बोसो कम गर्न मद्दत गर्छ ।
हड्डीलाई बलियो बनाइराख्न आइरनको धेरै आवश्यकता हुन्छ । यस्तोमा ब्रोकाउली खाने गर्नुहोस् । ब्रोकाउलीमा प्रचुर मात्रामा आइरन, प्रोटीन, क्याल्सियम, कार्बोहाइड्रेट, क्रोमियम, भिटामिन ए र सी पाइन्छ । जो शरीरका लागि धेरै लाभदायक हुन्छ ।
अण्डा नखाएर बडि बनाउनु अपूरो मानिन्छ । मशल्स बनाउन तथा फिट रहनका लागि प्रोटीन धेरै आवश्यक हुन्छ । एक अण्डामा ६ देखि ८ ग्राम प्रोटीन पाइन्छ । यसकारण जिम जाँदा तपाईले दैनिक ५–६ ओटा अण्डा खानु जरुरी हुन्छ ।
दैनिकरूपमा यी पाँच खानेकुरा अवश्य खानुहाेस्
भनिन्छ स्वास्थ्य नै ठुलाे धन हाे । स्वास्थ रह्याे भने न धन पनि अाउँछ । अाजभाेलीकाे बीजि दैनिकिमा कतिलार्इ खान फुर्सद समेत हुँदैन् ।
हामीले अाफ्नाे शरीरमा शक्ति सन्चय गर्न र पाेषण तत्वका लागि कम्तीमा पनि यी पाँच खानेकुरा खानुर्पछ ।
१. ठुलाे बदाम : यसले हाम्राे शरीरमा प्राेटिन, भिटामि इ, फाइबर अादि प्रदान गर्छ । यसले मुटुका बिरामी, सुगर, कफ जस्ता बिरामीका लागि पनि फाइदा पुर्याउँछ ।
२. अण्डा : हाम्राे शरीरमा यसले प्राेटिन अाइरन भिटामिन बि अादि प्रदान गर्छ । साथै कपाललार्इ पनि फाइदा पुर्याउँछ । यसले मुटुका बिरामीलार्इ पनि फाइदा पुर्याउाछ ।
३. ब्राेकाउली : यसले हाम्राे शरीरमा भिटामिन, मिनरल्स अादि प्रदान गर्छ । यसले क्यान्सर, लाे-प्रेसर, काेलेस्टाेरेल जस्ता बिरामीका लागि पनि फाइदा पुर्याउँछ ।
४. केरा : यसले हाम्राे शरीरमा भिटामिन, अाइरन अादि प्रदान गर्छ । दिनमा २ वटासम्म केरा खाँदा यसले स्वास्थ्यमा फाइदा पुग्छ ।
५. साल्माेन माछा : यसले मुटु, क्यान्सर, डिप्रेसनका बिरामीलार्इ फाइदा पुर्याउँछ ।
दैनिक रूपमा यी पाँच चीज खानुहुन्छ भने तपाइ स्वस्थ रहनुहुन्छ ।
यी हुन् हड्डी बलियो बनाउने पाँच खानेकुरा
दुधसँग सुन्तलाजस्ता अमिलो फलफूलको सेवन गर्नुहुँदैन । ब्रत बस्दा मानिसहरु केरासँग दुध खान्छन् जुन गलत हो । केराले कफ बढाउँछ भने दुधले पनि कफ बढाउन सहयोग गर्दछ । दुबै खाँदा कफको मात्रामा वृद्धि हुन्छ र पाचनमा पनि असर पर्दछ ।
त्यसो भए समयअनुसार खाने कि भोक लागेपछि मात्र ? जानौं केहि फईदा–बेफाईदाः
टाइमअनुसार खाना खाँदाका बेफाइदा
Don't Miss it तपाईंको खाने तरिका कस्ताे छ ? यस्ता बानीले निम्त्याउँछ समस्या
Up Next मान्छेले किन अरुको प्रगति, सफलताले सुखी बनाउँदैन ? किन मान्छेले अरुको नराम्रो मात्र देख्छ ?
कुनै पनि चिज खाइसकेपछि दाँतमा अड्किएको खाने कुरा कोट्याएर फाल्न हामी मध्ये कतिपयले सिन्का अर्थात टुथपिक प्रयोग गर्ने गर्छौं ।…